Guud ahaan noocyada kala duwan ee ganacsiga Soomaalida ee magaalada Jubba oo weli xiran – Radio Daljir
Guud ahaan noocyada kala duwan ee ganacsiga Soomaalida ee magaalada Jubba oo weli xiran
Diseembar 17, 2013 5:56 b 1
Jubba, December 17, 2013 – Ganacsiga magaalada Jubba ee xaruunta koonfurta Sudan ayaa maanta xiran, xili shalay iyo maanta ay is rasaasayn ka dhacday magaalada xaruunta u ah dowladda ugu da?da yar dunida.
Dad badan oo ajinebi ah ayaa xaruumo ganacsi oo wayn ku leh magaalada Jubba ee xaruunta koonfurta Sudan, dadkaas waxaa ku jira Soomaalida oo maalintii labbaad uu xiran yahay ganacsigooda.
?Ganacsigii yar yaraa ayaa xiran xataa maalintii labbaad, mana la furi karo ilaa ay degto xaalada magaalada.? ?Najiib Cilmi oo jubba jooga ayaa sidaas u sheegay warbaahinta Soomaalida
Ciidamada xukuumada Silver Kiir iyo kooxo ka soo horjeeda ayaa rasaas ku dhexmaraysaa magaalada Jubba maalintii labbaad, madaxweynaha dowladda South Sudan waxaa uu afgembi dhicisoobay ku tilmaamay weerarkii shalay.
Madaxweyne Silver Kiir waxaa uu ugu baaqay ganacsatada iyo bulshada rayidka ah inay howlaha u sii wataan sidooda, ciidamada amniga iyo meleteriga ayuu ku amray inay si haboon u sugaan amniga guud ee Jubba.
Garaad Jaamac oo ka digay in dad ka socda Sool iyo Cayn lagu daro Baarlamanka Puntalnd (Dhegeyso)
Madaxweyne Faroole iyo musharixiinta oo maanta ku shirsan madaxtooyada Puntland (Dhegeyso)
Mustafe 4 months ago
WAAa Ayaan daro